Publications nokubhala izihloko, Indaba
Nge amagama ambalwa, abantu Awunawo izinkinga - basuke nje ebhaliwe, kulula ukuba ayilime, noma conjugated, ngakho cishe njalo isetshenziswe ngendlela efanele. Nokho, kukhona ezinye amagama kungabangela izinkinga. Ngokwesibonelo, igama elithi "ushanela". Uma lesi senzo, ayokhonza njengamakhosi umuntu wokuqala sikhatsi lesitako, njengoba isidingo conjugate sento? Indlela: propylesoshu noma cleaner? Kuyinto lokhu futhi une ukuthola okwamanje.
Uma uyazibuza mayelana nendlela efanele - propylesoshu noma cleaner, kufanele ubheke isichazamazwi. Kodwa uma ungenayo incwadi ngakwesokunene, kulesi sihloko uzothola lonke ulwazi oludingekayo. Ngakho, uma sicabangela enkulumweni yanamuhla, ilungelo ukuba ukhetho lokuqala. Wena nakanjani kudingeka athi "Mina propylesoshu", uma unquma ukusebenzisa le design, futhi nalo mbuzo: Umshini noma propylesoshu - indlela? Kodwa musa ukuthatha isikhathi ukusebenzisa lelo zwi - yize ilungile futhi owamukelwa, kukhona kukho kakhulu efanelekayo ngaphezulu.
Ngo isiRashiya kunamagama okungafanele isetshenziswe ngandlela-thile. Ukuze yokudlulisela incazelo oyifunayo, e iningi lala macala lalineseluleko indlela achazayo, okungukuthi, esikhundleni sokusebenzisa igama elithile, wena ucele ukuchaza ngamanye amazwi, lokho ozokwenza. Futhi uma ufuna ukufunda indlela ukusho - "ushanela" noma "propylesoshu" - into yokuqala kuwufanele ngicabanga mayelana ifomu lelandzisako. Yiqiniso, njengoba kushiwo ngaphambili, inketho "propylesoshu" kuyabongeka lokho, kodwa izichazamazwi abahlonishwa kakhulu futhi izincwadi ekutheni kufanele uchaze isimo, kodwa akasebenzisanga amazwi anjalo. Kulokhu-ke kungcono ukuthi "ngizobuya ukuhlanza umata nge-vacuum cleaner" - lokhu kuyoba abanekhono kunabo, umklamo kuzohambisana yonke imithetho isiRashiya.
Ubani lo nalokho ubhala Richard Inqawe?
Schipper. Yini leyo? definition eyisisekelo yegama
Eructation emoyeni. Izizathu aerophagia.
"Norteks-umhlabathi": izici, ukubunjwa, izakhiwo, kanye nokubuyekeza
Ihhotela Casa Rofina Hideaway Indlu yetivakashi (Goa, India): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Simulator Umlenze Cindezela: Uhlolojikelele, ukusebenza amasu kanye nezincomo